အရသာမှာဆိုဆွေမျိုးမေ့သွားစေနိုင်မယ့် ကြေးအိုးဘုရင်… – FoodiesNavi
By May Me Lin On December 20, 2017 0
ကြေးအိုးကိုလူတိုင်းကြိုက်ကြပါတယ်။ မိုးအေးအေးလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ Shopping သွား၊လျှောက်သွားရင်းဗိုက်ဆာနေချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းကြေးအိုးလေးသောက်ချင်ကြမှာပဲ။ ပြောနေရင်းနဲ့တောင်သွားရည်ယိုစေမယ့်အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် အစားအသောက်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ Consumer တွေအားလုံးကို အရသာမှာဆိုဆွေမျိုးမေ့သွားစေနိုင်မယ့် ကြေးအိုးဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတစ်ဆိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ တော်တော်များများလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မသိသေးဘူးဆိုရင်လည်း လမ်းညွှန်ပေးမယ်နော်။ စျေးလည်းအသင့်တင့်နဲ့အရမ်းကိုစားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ စုံတွဲပဲသွားစားစား၊ မိသားစုလိုက်ပဲစားစား၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပဲစားစား အရမ်းစားကောင်းပြီး ကုန်ရကျိုးနပ်တဲ့ဆိုင်လေးမို့ အစားအသောက်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ Consumer တွေကိုဝါသနာတူချင်းမို့ဝေမျှပေးချင်တယ်နော်။
ကဲဒီဆိုင်လေးကတော့ Kyay Oh Ba Yin –ကြေးအိုးဘုရင်ဆိုတဲ့အရသာမှာအရမ်းကောင်းတဲ့ကြေးအိုးဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးက၁၉၆၈ခုနှစ်ကတည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးစားသုံးသူတွေအရမ်းကိုကြိုက်တဲ့အတွက်အခုဆိုဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်တုန်းကဆိုညီမတို့တောင်မမွေးသေးဘူး။ ညီမတို့အဖေ၊အမေတွေလက်ထက်ကတည်းကအရမ်းကိုလူကြိုက်များပြီးရောင်းကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
မြို့ထဲဗိုလ်ချုပ်စျေး နဲ့ JUNCTION CITY မှာ Shopping ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Super One မှာပဲစျေးဝယ်ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သွားထားတာပင်ပန်းပြီးဗိုက်ဆာလာပြီဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူဝင်စားလို့ရတဲ့ Kyay Oh Ba Yin –ကြေးအိုးဘုရင် ဆိုင်လေးရဲ့ Location လေးကတော့– အမှတ်(၁၆၈/၁၈၈)၊ ၂၇ လမ်း(အထက်)၊ အခန်း၁၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်စျေးရှေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်တစ်ခုထဲမဟုတ်ပါဘူး အခြားဆိုင်ခွဲလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ညီမသိသလောက် Share ပေးမယ်နော်။
Shop 1: Upper 27th Street, in front of Bogyoke Market
Shop 2: Middle 36th street
Shop 3: Sin Oh Dan Street
Shop 4: Bo Myat Tun Street
Shop 5: Mahabandoola Street, Between 37th and 38th street.
All outlets are located in yangon.
ကြေးအိုးအပြင်ကိုအရသာရှိစျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ ကြေးအိုးဘုရင်ကရိုးရိုးဆီချက်ကလည်းတကယ့်ကိုအရမ်းကိုကောင်းတဲ့အတွက် ပြောရင်းနဲ့ကိုစားချင်လာတယ်။ စစ်မှန်တဲ့အရသာကိုသိချင်ရင်ကြေးအိုးဘုရင်မှာ ရှာဖွေလို့ရတယ်နော်။
Kyay Oh Ba Yin Official Website Link : kyay-oh-ba-yin.business.site
Kyay Oh Ba Yin Official Facebook Page : www.facebook.com/kyayoobayin
In Restaurant Guides Tagged Kyay Oh, Kyay Oh See Chat, salad, signature chicken butt mix, signature chicken mix, signature chicken wing mix, simply noodle, wantons Leaveacomment